पोर्क करी खानामा भेटियो मानिसको दाँत ...
एउटा चिनियाँ रेष्टुरेन्टबाट होम डेलिभरी गरिएको खानामा मानिसको दाँत भेटिएको छ । यद्यपि, अनुसन्धानपछि रेष्टुरेन्टमा कुनै पनि प्रकारको कारवाही नगर्ने निर्णय गरिएको छ । रेष्टुरेन्टका म्यानेजरले आफ्ना सबै कर्मचारी डीएनए परीक्षणका लागि तयार भएको जसका कारण ...
अमेरिकी राष्ट्रपति भवनलाई किन भनिन्छ ह्वाइट हाउस ? ...
जुनसुकै देशमा पनि राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा आवास विशेष नहुने कुरै भएन । हामीकहाँ राष्ट्रपति भवनलाई शितल निवास भनिन्छ । त्यस्तै अमेरिकामा ह्वाइट हाउसको नामले चिनिन्छ । के अमेरिकी राष्ट्रपति भवनको रङ सेतो भएका कारण यसलाई ह्वाइट हाउस अर्थात् सेतो घर भन ...
खुनी टेलिफोन, जसले लिएको थियो लाखौँको ज्यान ...
अहिलेको जमानामा टेलिफोन जस्ता सूचना प्रविधिका माध्यमहरु लाखौँ मानिसलाई अकालमा मर्नबाट जोगाउने साधन बनिरहेका छन् । तर यहीँ टेलिफोन इतिहासमा कुनै समय लाखौँ मानिसको मृत्युको कारण बनेको थियो । त्यो खुनी टेलिफोनको कहानी दर्दनाक छ । सन् १९४० को दशकमा लाखौ ...
जसले अर्कोको जमिन देखाई बैना लिने गर्दथे ! ...
सुनसरी, मोरङ र झापाका सोझा सिधा व्यक्तिलाई अर्काेको जग्गा देखाई बैनी लिनेदेखि बिदेश पठाइदिन्छु भनेर पैसा असुलेको आरोपमा इटहरीका लोकबहादुर कार्की बुधबार पक्राउ परेका छन् । कार्की बिरुद्ध एक दर्जन बढी निवेदन परेको इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले जनाएको ...
पबजी खेल्दाखेल्दै हृदयघात, एक युवकको मृत्यु ...
भारतको पुणे घर भएका एक युवक गत बिहीबार घरैमा बसेर मोबाइलमा पबजी खेल्दै थिए। उनलाई अचानक हृदयघात भयो। हृदयघात हुनासाथ अस्पताल पुर्‍याइएका उनको उपचारको क्रममा शनिबार निधन भएको छ। समाचारमा जनाएअनुसार हर्सल देवीदास नामका ती २७ वर्षीय युवकलाई पबजीको ...
इरानी क्षेप्यास्त्र प्रहारबाट युक्रेनी विमान खसेको प्रमाण भेटियाे ! (भिडियाेसहित ...
पश्चिमा देशहरूले इरानी क्षेप्यास्त्रका कारण युक्रेनको यात्रुवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको प्रमाणहरु भेटिएको दावी गरेका छन् । यसअघि नै अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले इरानले नै क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेर उक्त विमान खसालेकाे दावी गर्दै आएका थिए । क्यानडा र ...
को-को कहलिन्छन् संसारकै क्रूर शासक ? ...
विश्वमा यस्ता अनेक शासक तथा नेता पैदा भए जो आफ्नो शासन–सत्ता टिकाउनका लागि मानवताकै सङ्कट पैदा हुने गरी क्रूरताको सीमा नाघ्न हिच्किचाएनन् । बितेको एक सय तीस वर्षमा यस्ता अनेकौँ राजनीतिक नेताहरूले भयावह रूपमा जनसंहार या हत्याका साथै अनेकौँ क्रूर ...
यौन आवेगमा पत्नीले पतिको अण्डकोष टोकेर अलग गरिदिइन ...
आफ्नी पत्नीसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्दाराख्दै ताइवानका एक पुरुषलाई अस्पताल भर्ना गर्नु परेको छ । ताइवानको न्युज वेवसाइड एपल डेलीका अनुसार शारीरिक सम्बन्ध राख्ने क्रममा वाङ नामक पुरुषकी पत्नीले पतिको अण्डकोष टोकेर अलग गरिदिएकी हुन् । घटनाको बारेमा अस्प ...
मोरङमा लागूऔषधसहित बेहुला पक्राउ ...
बिहेको अघिल्लो दिन एकयुवा विराटनगरबाट लागूऔषधसहित पक्राउ परेका छन् । भोलिपल्ट बेहुला बनेर बेहुली लिन जानुपर्ने युवा लागूऔषधसहित पक्राउ परेपनि बिहे भने प्रहरीकै निगरानीमा सम्पन्न भएको छ। बिहे सम्पन्न गराएर प्रहरीले अदालतबाट म्याद थप गरेर उनीमाथ ...
बलात्कृत भएपछि दिदीबहिनीले गरे बावुको हत्या ...
आफ्नै बावुबाट बलात्कृत भएपछि तीन दिदीबहिनीले बावुको हत्या गरेका छन् । क्रेस्टिना, एन्जेलिना र मारिया खचतुर्यानले बावुलाई चक्कु प्रहार गरेका थिए । छोरीहरुको आक्रमणबाट घाइते भएका बावु मिखाइलको हालै मृत्यु भएको हो । रुसमा लामो समयसम्म बावुबाट यौन शोषण ...